ပရိသတ်တွေ သတိမပြုမိလောက်တဲ့ နာမည်ကျော်ဘောလုံးသမားတွေရဲ့ နာမည်အပြည့်အစုံ အပိုင်း(၁)
ဝေးလ်စ်အသင်းရဲ့ ငှက်မြန်လို့ တင်စားရမယ့် ဂါရတ်ဘေးလ် Gareth Bale ကို ၁၉၈၉၊ ဇူလိုင် (၁၆)ရက်မှာ ဗြိတိန်နိုင်ငံ၊ ကာဒစ်ဖ်မြို့မှာ မွေးဖွားခဲ့တယ်။ သူ့ ဖခင်က Frank Bale လို့ အမည်ရပြီး ကျောင်းတစ်ခုရဲ့ အလုပ်သမားတစ်ဦးပါ။ မိခင်ကတော့ Debbie Bale က Operations Manager တစ်ဦးဖြစ်ပါတယ်။ ဂါရတ်ဘေးလ်ရဲ့ ဦးလေး Chris Pike က ကာဒစ်ဖ်အသင်းရဲ့ ဘောလုံးသမားဟောင်းဖြစ်လို့ ဂါရတ်ဘေးလ်က အဖေ၊ အမေနဲ့မတူဘဲ ဦးလေးခြေရာလိုက်နင်းခဲ့တယ်လို့ ဆိုရမယ်။
ဂါရတ်ဘေးလ်ရဲ့ နာမည်အပြည့်အစုံကတော့ Gareth Frank Bale ဖြစ်ပါတယ်။ ဝေးလ်စ်နိုင်ငံရဲ့ ထုံးတမ်းအစဉ်အလာအရ အဖေရဲ့ နာမည်ကို ထည့်သွင်းရတာကြောင့် ဂါရတ်ဘေးလ်ရဲ့နာမည်က Gareth Frank Bale ဖြစ်လာတာပါ။ ဂါရတ်ဘေးလ်ဟာ လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာတွေပေါ်မှာ Followers အများဆုံးစာရင်းဝင်ဖြစ်ပေမယ့် သူ့ပရိသတ်တွေထဲမှာ ဂါရတ်ဘေးလ်ရဲ့ နာမည်အပြည့်အစုံကို သိတဲ့သူက ခပ်ရှားရှားဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။
ဘာစီလိုနာမှာ ဂိုးတွေ တဒိုင်းဒိုင်း သွင်းနေတဲ့ ဥရုဂွေး Goal Machine လူးဝစ်ဆွာရက်ဇ် Luis Suarez ရဲ့ နာမည်အပြည့်အစုံကိုရော ပရိသတ်တွေ သိပါရဲ့လား။ ဆွာရက်ဇ်ရဲ့ နာမည်အပြည့်အစုံကတော့ Luis Alberto Suarez Diaz ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါက စပိန်နိုင်ငံရဲ့ ထုံးတမ်းအစဉ်အလာရ သတ်မှတ်ပေးခဲ့တာပါ။ ဆွာရက်ဇ်ရဲ့ ဖခင်ဖြစ်သူက Luis Alberto ဖြစ်ပြီး မိခင်ရဲ့ နာမည်က Diaz ဖြစ်ပါတယ်။ မိဘနှစ်ဦးရဲ့ Surname ကို ယူပြီး Luis Alberto Suarez Diaz ရယ်လို့ဖြစ်လာခဲ့တာပါပဲ။
မန်ယူအသင်းရဲ့ ဂိုးပေါက်ကို စွမ်းစွမ်းတမန် ကာကွယ်နေတဲ့ ဂိုးသမား ဒီဂီယာ David De Gea ကို ၁၉၉၀ ခုနှစ်၊ မက်ဒရစ်မြို့မှာ မွေးဖွားခဲ့ပြီး သူ့အဖေက Jose လို့ အမည်ရတဲ့ ဂိုးသမားဟောင်း၊ မိခင်ကတော့ Marivi လို့ နာမည်ရပါတယ်။ ငယ်ငယ်က စာတော်တဲ့သူတွေထဲမှာ ပါဝင်ခဲ့ပေမယ့်လည်း ဒီဂီယာကတော့ ဖခင်ရဲ့ခြေရာကို လိုက်နင်းခဲ့ပြီး ဂိုးသမားတစ်ဦးအဖြစ် အသက်မွေးခဲ့တယ်။ ဒီဂီယာရဲ့ နာမည်အပြည့်အစုံက David De Gea Quintana ပါ။ De Gea ဆိုတာက သူ့ဖခင်နောက်ဆုံးနာမည်ဖြစ်ပြီး Quintana မိခင်နာမည်ဖြစ်ပါတယ်။
လီဗာပူးလ်နဲ့ အီဂျစ်တို့အတွက် Th King လို့ တင်စားရမယ့် မိုဟာမတ်ဆာလာ Mohamed Salah ရဲ့ နာမည်အပြည့်အစုံကိုလည်း သိတဲ့သူ ခပ်ရှားရှားဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ ဆာလာကို ၁၉၉၂၊ ဇွန်လ (၁၅)ရက်မှာ မွေးဖွားခဲ့ပြီး သူ့နာမည်အပြည့်အစုံက Mohamed Salah Ghaly ဖြစ်ပါတယ်။ ငယ်ငယ်ကတည်း ဘောလုံးကို အရူးအမူးဖြစ်ခဲ့တဲ့အတွက် သူ့မိဘတွေက ပညာရေး မထူးချွန်မှာကို စိုးရိမ်ခဲ့ကြတယ်။ ဒါပေမဲ့ ဆာလာဟာ ငယ်စဉ်တုန်းက စာတော်တဲ့သူ တစ်ယောက်တော့ မဟုတ်ပါဘူး။
ဘယ်လောက်ပဲ စာ ကြိုးစားပါစေ Result က တိုးတက်မှု မရှိခဲ့ဘူး။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ ဆာလာဟာ ဘောလုံးမကစားရရင် ရုပ်သံကနေ ဘောလုံးပွဲတွေကို တစ်ချိန်လုံးကြည့်နေလို့ဖြစ်ပြီး ပညာရေးဘက်ကို အာရုံမရှိခဲ့လို့ပါပဲ။ ဒါကလည်း ဒီနေ့ဒီအချိန်မှာ ကမ္ဘာကျော်ဘောလုံးသမားတစ်ဦး ဖြစ်လာဖို့အတွက် တွန်းအားတစ်ခုဖြစ်စေခဲ့တယ်လို့ ဆိုရမယ်။
ချယ်လ်ဆီးအသင်းရဲ့ ဘယ်လ်ဂျီယံ ကြယ်ပွင့် ဟာဇက် Eden Hazard ဟာ ဘောလုံးသမား မိသားစုကနေ မွေးဖွားလာသူတစ်ဦးဖြစ်ပါတယ်။ သူ့အဖေ Thierry ဟာ ဘောလုံးသမားတစ်ဦးဖြစ်သလို မိခင်ဖြစ်တဲ့ Carine ဟာ အမျိုးသမီးအသင်းမှာ တိုက်စစ်မှူးတစ်ဦးပါ။ အေဒင်ဟာဇက်လို့ လူသိများတဲ့ ဟာဇက်ရဲ့ နာမည်အပြည့်အစုံက Eden Michael Hazard ဖြစ်ပါတယ်။
ပရိသတ်ကြီးရေ . .ဒါကတော့ နာမည်ကျော်ကစားသမားတွေရဲ့ နာမည်အပြည့်အစုံ အပိုင်း(၁)ဖြစ်ပါတယ်။ အပိုင်း(၂)ကိုလည်း ဆက်လက်ဖော်ပြသွားမှာဖြစ်လို့ အားပေးကြပါဦး . .